Wholesale Chandelier PC-214 Crystal art chandelier maha-izy azy chandelier tsotra chandelier Mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-214 Crystal art chandelier toetra tsotra chandelier tsotra chandelier
Loko: Mainty + Volafotsy
Size: 80cm ny savaivony
Manazava ny efitranonao miaraka amin'i Randall Chandelier mahafinaritra. Ny endrika milalao an'ity pendant vita amin'ny peratra 3 vita amin'ny varahina ity dia hanampy olona ao anaty anao. Ny peratra tsirairay dia azo ahantona amin'ny toerana tiana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny halavan'ny tariby. Ny jiro LED miharo dia manaparitaka tsara ny hazavana amin'ny alàlan'ny haingon-trano fitaratra kristaly.
Ity mpivady chandelier mahafinaritra ity dia kristaly manjelanjelatra miaraka amina famaranana chrome mamirapiratra mba hamoronana teboka lehibe eo amin'ny toerana tianao indrindra. Ny jiro 5 dia voahodidin'ny kristaly mitete lavalava 7 sosona izay samy voafono amin'ny sehatra malefaka ao anaty cascade symmetrika. Ny fitaovana Chrome sy ny tadin'ny metaly 3 azo ovaina dia mirefy 40 in. Izay mety indrindra amin'ny haavon'ny valindrihana sy ny haben'ny efitrano.
Toy ny ranon'ando amin'ny aloky ny ala, ny famoriam-bolan'ny Golden Lighting's Autumn Twilight dia mampiseho vakana fitaratra manjelanjelatra izay mihintsana amin'ny ravina sy rantsana organika. Ity nodinina ho an'ny natiora ity dia mahazo fihodinana maoderina miaraka amin'ny famaranana Mystic Gold izay mahatonga azy io ho voajanahary amin'ny toerana ankehitriny. Ity chandelier 6 hazavana ity dia mamorona teboka mifantoka endrika tsara sy faritra fisakafoana mialoha.
Sombin-dresaka tena izy
Ny rantsana biolojika dia voasokitra amin'ny vy ary atambatra amin'ny kristaly cascading mba hamoronana sary hosodoko amin'ny ala mikitroka
Teo aloha: Chandelier PC-8237 Mpiorina mpiorina mpiorina chandelier mpiorina tsotra tsotra
Manaraka: Chandelier PC-8262 Light chandelier metaly kanto hazavana
Chandeliers SPWS-C012 Modern kanto fitaratra kiho ch ...
Chandelier PC-8269 Boribory kanto chandelier olona ...
Chandelier PC302 vy vaovao toetra vy ...
Flush Macks SPWS-F003 Manambatra ny luxur be indrindra ...